Chinja maitiro evatengi neBadegeville | MarTech Blog
Chishanu, June 22, 2012 Svondo, Gunyana 8, 2013 Douglas Karr
Iko kugona kushandura maitiro evatengi kungave iri inoera grail yee-vatengesi. Chinetso nekubata vatengi munharaunda yanhasi kuvimbika kwavo kusingagumi pavanotarisana nesarudzo dzakawanda. Kugadzirisa izvi, mabhizinesi anofanirwa kushandura marongero parwendo kana kupa zvinoda mutengi munguva pfupi. Izvi hazvigare zvichikwanisika neanhasi mashoma zviwanikwa. Gamification zano riri kubatsira vashambadzi neiyi nhamburiko.
Imwe kambani yekumesa iri pane yakanyatso rongedzwa izvozvi iri Badgeville. Badgeville nguva pfupi yadarika akapfuura neimwe nzira yemari, akawana iyo Kugadziriswa Wiki, uye yakatanga magariro makanika. Badgeville inopa chaiyo turu yekushandisa iyo inopa mhinduro kumatambudziko ekumanikidza.
Badgeville inoshandisa mutambo wevanamakanika, zvemagariro makanika uye mukurumbira makanika uye vanoongorora maitiro ezviito kana maitiro kana mushanyi webhusaiti. Iyo robust system inogona kushandisa fungidziro yekupindura kune mushanyi zvichibva pane izvo mushanyi anoona sezvakanaka kana zvinonakidza. Pakati peBadgeville's kuchenjera kukwirisa chirongwa ichi ndiyo Behaeve Platform iyo inoteedzera maitiro uye inoshandisa yakavhenekerwa yekubata mamakanika ekuvandudza kusangana kwevashandisi, kubatanidza mutengi zvirinani uye nekuvandudza kugadzirwa kwevashandi.
Iyi Behaeve Platform inosanganisira muunganidzwa wematurusi akakosha.
Iyo Behaeve Injini inoratidza uye nekupa mubairo yakakwira-kukosha mushandisi maitiro.
Engagement Mechanics inovandudza kushanya kwevashanyi nekushandisa chaiyo nguva mhinduro kupa mutambo wemagariro sechiitiko kune mushanyi.
Behaeve Analytics inopa mabhizinesi ne data uye nzwisiso inoita kuti bhizinesi rinzwisise mashandiro anoita vanhu zvine chinangwa navo.
Widget Studio & Yekuvandudza Zvishandiso muunganidzwa wemasimba ekuvandudza maturusi ayo anotendera iro bhizinesi kumisikidza intuitive uye kutsiga Engagement Layers pane maficha avo.
Kuendesa kukwirisa mukati mevatengi vebhizinesi nevashandi, Badgeville inopa matanhatu Maitiro Ekuzvibata, ayo ari Turnkey mhinduro dzinomhanya dzakasiyana siyana dzeBehavior Platform.
The Core Gamification chimiro inobvumidza iyo bhizinesi kushandisa gamification pane zvakajairika kana zvevamwe kusangana kwevatengi.
The Nharaunda Nyanzvi sisitimu inovandudza mapuratifomu enharaunda.
The Yemakwikwi Piramidhi chimiro inotaurira bhizinesi iro chirongwa chakanangana nevatengi chinoshanda zvakanyanya
The Nyoro Yekutungamira sisitimu inobvumidza mabhizinesi kuendesa zvinokurudzira kune vese vatengi kana vashandi kuti vazvibate mune inodikanwa maitiro.
The Nharaunda Yemubatanidzwa inobatsira bhizinesi kutora enharaunda bhizinesi matekinoroji zviri nani kuburikidza nehurongwa hwemubairo.
The Company Dambudziko sisitimu inogona kungova mhinduro kuminamato yeHR, nekuti inobvumidza kugadzira makwikwi anonakidza uye kupa kwakanangana nekuwedzera kubatana pakati pevashandi uye nekudaro kunatsiridza kugadzirwa nehunhu.
Badgeville zvakare inopa iyo Widget Studio - muunganidzwa weganda rinogoneka uye rinogadziridzwa wijeti. Aya majeti anosanganisira emabhodhi evatungamiriri, zvibudiriro zvinoratidza, chiitiko chenguva-chaiyo saiti, chinzvimbo cheshamwari, musoro wewadhi-diki, zviziviso, nezvimwe.
Kushanda pamwe naJammer